बिचरी सियोना श्रेष्ठ को स्वास्थ्य फेरी समस्या देखिएको छ!!! फेरी पोलण्ड जादै सिघ्रा स्वास्थ्य लाभ को कामना गरौ|| « गोर्खाली खबर डटकम
बिचरी सियोना श्रेष्ठ को स्वास्थ्य फेरी समस्या देखिएको छ!!! फेरी पोलण्ड जादै सिघ्रा स्वास्थ्य लाभ को कामना गरौ||
ल सियोना र उनको परिवारको कथा छ। कृपया हामीलाई सहन। हाम्रो छोरी सियोनाले १२ सेप्टेम्बर २०१ 2019 मा यस संसारमा कदम चालेका थिए। मलाई त्यो दिन अझै याद छ। मैले उनलाई अँगालोमा हालेर हामी धेरै खुसी थियौं। उनी एक स्वस्थ बच्चा केटी थिइन र म अझै पनि उनको चम्किलो र ठूला आँखाहरूले मलाई घोरिएको सम्झना गर्दछु। हामी तुरुन्तै उनको साथ प्रेम भयो र उनको भविष्य सोच्न शुरू। हामीले उनलाई उनको जीवनको हरेक आवश्यकताहरू प्रदान गर्ने सोच्य राख्यौं –
हाम्रो डाक्टरले केही न्यूरोलजिकल जाँच, केही रक्त परीक्षण र मस्तिष्क स्क्यान गरे र परीक्षण गरे। सबै सामान्य थियो र हामीलाई बताइएको थियो कि उनी शैशवकालको सौम्य हाइपोनिसिया हुनसक्छिन्। केवल केहि फिजियोथेरापी र चिन्ताको लागि धेरै केहि छैन:
नयाँ पाकिस्तान सरकारले भारतसँग शान्ति वार्ता सम्झौता गर्न सक्छ: थिंक ट्याङ्क